Fampisehoana nataon’ny ankizin’ny CHT | Grandir à Antsirabe
SHOWCASE : Fampisehoana dihy sy hiran’ny ankizin’ny CHT
→ Ny sabotsy 29 oktobra 2017
Ny sabotsy 28 oktobra 2017 no notanterahina teto Antsirabe ny hetsika voalohany amin’ny fami
ntinana ny fampianarana mozika ho an’ireo ankizin’ny trano fampiantranoana vonjimaika na CHT. Niarahana tamin’ny fikambanana Foulosophe izay mampivondrona mpanakanto malagasy.
NY fampisehoana izay notanterahina tao amin’ny La Palette, nanoloana olona teo amin’ny efapolo teo, dia nahafahan’ireo ankizin’ny CHT nampiseho ny fampianarana mozika azon’nizy ireo nandritry ny efa-bolana.
Fanomanana ny fampirantiana niarahana tamin’ny ekipa sy ny mpanakanto Farahaingo
Ny maraina dia nisy ny ekipa nanomana ny fampirantiana sary izay tsara indrindra an’ny fikambanana sy ireo teboka famantarana ny ankizin’ny lalana. Nandritra izany fotoana izany i Farahaingo izay mpanao sary ary koa mpamorona ny Foulosophe dia nanomana ny toerana izay nampirantiany ny sary miteny na BD izay nataony farany.
Tetsy andaniny ireo ankizy
Nifampotoana tamin’ny 11h atoandro tao amin’ny CHT izy ireo mba hiara-hisakafo amin’ireo mpanabe tao amina fivarotana iray teo amin’ny manodidina. Avy eo dia niomana tamin’ny fihaingoana : nanao akanjo vaovao ary nametaka kojakoja madinika ho an’ny dihy izay nomanina.
Raikitra ny fampisehoana !
Rehefa avy naka aina ireo ankizy dia nanomboka ny fampisehoana. Hira malaza efatra no nanombohana ny hetsika : ny ankizy sasany mihira sy mandihy ary ny sasany mively aponga. Nanampy an’ireo Foulosophe izy ireo avy eo tamin’ilay hira heo « Si j’étais président » ary nofaranana tamin’ny Slam mitondra ny lohateny hoe « un autre regard ». izany rehetra izany dia nanoloana ireo mpanatrika tonga navitrika izay voakasiky ny hafaliana nozarain’ireo ankizy. Ankizy mpianatry ny Foulosophe (ivelan’ny CHT) matihanina telo no nanohy ny hetsika ary andray ny djembé nanaovany hira roa. Ny ankizin’ny lalana teo dia nahita ny vokatry ny fiezahana tamin’ny alalan’ny fahaizan’ireo ankizy, izany dia natao hambitomboana ny fikirizan’izy ireo mba ho lasa matihanina ihany koa.
Nofaranana tamin’ny fizarana sakafo maivana ho an’ireo ankizy ny fotoana, sakafo izay nomanin’ny fikambanana foulosophe ho azy ireo. Nahatsapa hafaliana tanteraka ireo ankizy tamin’ny alalan’iny hetsika iny.
Nanapa-kevitra ny tsy hijanona hatreo ireo foulosophes, rehefa nahatsapa izy ireo ny vokatry ny fampianarana nataony sy nahita ny talentan’ireo ankizy. Nametraka fampianarana matihanina ho an’ireo ankizy in-1 isan-kerinandro izy ireo.
Ary rahoviana ny fampisehoana manaraka ?
Lire aussi : Portrait/ Nandrianina : ilay mpisolo vava ny ankizin'ny lalana